CBS All Access Discount ho an'ny mpianatra (2020) - Raiso izao! - Fialam-Boly
Ahoana ny fomba ahazoana ny fihenan'ny mpianatra CBS?
Araka ny tranokalan'ny CBS, ny CBS All Access dia hanolotra fihenam-bidy ho an'ny mpianatra izay manome anao 25% amin'ny faktiora isam-bolana. Ity fihenam-bidy ity dia manan-kery amin'ny safidy 'Varotra voafetra'. Noho izany, midika izany fa handray ny streaming an'ny CBS amin'ny taha misy fihenam-bidy ireo mpianatra hijerena ny seho an-tsitrapo miaraka amin'ny fahitalavitra mivantana izay misy an'i Big brother, NFL, ary maro hafa.
Ireo mpianatra mandoa $ 5,99 isam-bolana ho an'ny serivisy CBS All Access Streaming dia mahazo fihenam-bidy ary mandoa $ 4.50 isam-bolana ho an'ny serivisy famandrihana. Raha ny marina dia mety ho fifanarahana ara-drariny ho an'ny mpianatra eny amin'ny oniversite io.
Momba ny CBS ALL Access Discount ho an'ny mpianatra:
Ny CBS All Access koa dia serivisy mivantana mivantana mivantana natolotry ny CBS. Ity serivisy streaming ity dia manana katalaogin'ny fandaharana fahitalavitra mivantana an'arivony izay mandeha mandritra ny taona. Mahaliana fa ny safidy amin'ny fahitalavitra mivantana dia ahafahanao miditra amin'ny PGA Tour, fifaninanana NCAA, ary hetsika ara-panatanjahantena mivantana maro hafa.
Miaraka amin'izany, azonao atao koa ny mijery ireo fandaharana amin'ny fahitalavitra tianao amin'ny fangatahana sy seho mivantana koa. Ny programa CBS dia misy an'i Young Sheldon, The Big Bang Theory, Man with a Plan, NCIS, ary ny seho CBS All Access voalohany malaza indrindra, Star Trek: Discovery ary The Good Fight. Ho fanampin'izany, ity streaming ity koa dia manana programa taloha toa ny Under the Dome sy i Jeriko.
Inona no azonao amin'ny fihenan'ny mpianatra amin'ny CBS Access rehetra?
Ny fihenam-bidy ataon'ny mpianatra dia mamela anao hanana drafitra 'Varotra voafetra' izay midika fa tsy hanao dokambarotra tsindraindray fotsiny ianao eo am-pijerena ireo seho an-tsitrapo. Ny fihenan'ny mpianatra 25% CBS All-access dia azo ampiharina amin'ny kinova famerana voafetra ihany fa tsy ho an'ny kinova doka maimaimpoana.
Mba hahazoana io fihenam-bidy io dia mila misoratra anarana amin'ny fihenan'ny mpianatra CBS All Access miaraka amin'ny oniversiteo ianao na .edu adiresy mailaka.
Izany dia satria rehefa misoratra anarana amin'ny idanao amin'ny oniversite ianao dia fantatry ny CBS All Access fa mpianatra voasoratra anarana amin'ny oniversite ianao. Aorian'ny fizotry ny fisoratana anarana, ny CBS All Access dia mamela anao handefa mivantana amin'ny tambajotran'izy ireo ahafahanao mandefa seho mivantana sy hetsika hafa.
1. Fanatanjahantena mivantana
Ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra CBS All Access dia manome anao fidirana amin'ny fanatanjahantena mivantana izay misy fitsangantsanganana PGA mivantana, lalao NFL, fifaninanana NCAA, ary hetsika ara-panatanjahantena maro hafa. Ankoatr'izay, hahazo miditra mijery seho mivantana ianao na amin'ny fangatahana. Noho izany, afaka mankafy ny fanatanjahan-tena ianao amin'ny fotoana rehetra.
2. Series CBS tany am-boalohany
CBS dia manome anao fidirana amin'ny andian-tsarimihetsika CBS tany am-boalohany izay mety tsy hitanao any an-kafa. Tsy ho ela dia hanaiky anao i Sir Patrick Stewart amin'ny anjara asany malaza amin'ny andian-tantara ho avy Jean-Luc Picard.
Aza adino ny mijery ny vanim-potoana faharoa amin'ny Star Trek: Discovery. Tazomy hatrany ny momba an'i Kevin Williamson's, Tell Me A Story. Dolara iray, angano, angely hafahafa dia manome anao tsy ampoizina amin'ity indray mitoraka ity.
Big Brother, fampisehoana zava-misy malaza indrindra ary malaza indrindra amin'ny tantaran'ny Tv. Miandry fatratra ny vanim-potoana ny olona hijerena ireo olo-malaza tiany mihidy ao an-trano mandritra ny telo volana. Ankehitriny ianao dia afaka mahazo miditra amin'ity seho ity amin'ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra izay manatsara ny fialambolinao.
Izany rehetra izany dia fikororohana fotsiny izay manasongadinay ireo fampisehoana miavaka izay azonao amin'ny fihenan'ny mpianatra CBS All Access. Aorian'ny fisoratana anarana ho an'ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra, azonao atao ny miditra amin'ny buzz fahitalavitra isan-karazany sy ny vanim-potoana ho avy ateraky ny CBS ary ny kintan'ny fanatanjahantena ankafizinao sy ny fanavaozana ny olo-malaza ankehitriny.
Aza mipetraka ary faingana! Midira ao amin'ny tranokala CBS, araraoty ny fihenam-bidy, ary mankafiza serivisy fitsapana mivantana sy maimaim-poana hijerena ireo seho tianao indrindra.
Fanolorana fihenam-bidy ho an'ny mpianatra hafa tokony hojerena:
Blink XT2 Review - Fakan-tsarimihetsika ivelany tsy misy tariby?
hira roblox id làlan'ny tanàna taloha
ny fomba fanapahana roblox sy hahazoana robux
ianao fantsona ho mp3 download
maimaimpoana maimaimpoana miaraka amin'ny prime amazon
sarimihetsika streaming tsy misoratra anarana